YawNathan Zinyaw: စာရေးခြင်း၊ စာအုပ်များ နဲ့ ကျမ
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 12:37 PM
ကျေးဇူး အမ။ ကျနော်က ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။
စီဘောက် ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
နုတ်ဆက်တော့ “နေကောင်းလား” “မဂ်လာပါ”
“ပို့စ်အသစ်တက်မလားလို့” စသဖြင့် အချင်းချင်း
နုတ်ဆက်တဲ့ သဘောပါ အမ။ ဆရာကြီး ဓမ္မိကဦးဘသန်း ရယ့် ဘ၀တို့။ သူပြောတဲ့ အကြောင်း
တို့ တစ်ခုခုကို အမရေးရင် အဲဒါ ပို့စ်ဖြစ်တာပေါ့ အမ။
အခုလို့ အလုပ်များတဲ့ ကြားက ဒီလိုရေးတော့လည်း ပို့စ်ပေါ အမရယ်။ ကျေးဇူးနော် အမ။
စာရေးခြင်း၊ စာအုပ်များ နဲ့ ဘဝ ဆိုတာလောက် ကောင်းတာ ရှိပါ့ဦးမလား......?
သြော် ခက်ပ၊ ဘလောဂ်ဆိုတာကလဲ သူများတွေ ၀ယ်ဖတ်နေတဲ့ နာမည်ကြီး စာအုပ် အတန်းအစားမှ မဟုတ်တာ။ စိတ်ထဲ ရှိတာတွေ ရေးသာ ရေးချပါ။
ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ်ရေးဆိုတော့လဲ အများသဘောနှင့် မတိုက်ဆိုင်တာတွေလဲ ရှိနိုင်တယ်လေ။
ကိုယ့် သိတဲ့ ဗဟုသုတလဲ ရှိမယ်။ ကိုယ်သိတာကို သူများအား တင်ပြခြင်းလို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါ။ လိပ်စာကို သိတဲ့သူတွေ လာဖတ်သွားမှာပဲလေ။ ဟုတ်။
ကိုလူလရေ ခုလိုအားပေးတာကျေးဇူးပါ။ ကြိုးစဲာပီးတော့ရေးပါ့မယ်။
ဟုတ်တယ်.. မမယောရေ... စိတ်လေးလည်းကြည် လူကလည်းအားမှ ရေးဖြစ်တာ.. စိတ်ထဲမှာ ရေးဖြစ်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲနော်...
လက်ကချရေးဖို့ကျတော့ ပျင်းတာနဲ့ မေ့သွားတာနဲ့ ဖြစ်တတ်တယ်...
ရေးချင်တာသာ ချရေးလိုက်... လာဖတ်မယ်နော်...
u and me have somethings in common. My pen name is yawnathan and I amabeginner blogger.It is also difficult to consider which is reasonable for the blog and the readers. If u r ok, please visit my blog.It is now justastart and it has so many necessaries. I want to know how to create read more function. If u r ok, please give meahand.
ကာတွန်းကားတွေ ခုထိကြိုက်တာ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။ အားမငယ်ပါနဲ့ ဟီဟိ (အဖော်ရပြီ)။ စာအုပ်တွေ အများကြီး ဖတ်ထားတာပဲနော်။ ကျမလည်း ငယ်ငယ်က စာအုပ်တွေ အများကြီးဖတ်လို့ရတဲ့ နွေရာသီကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဆရာမောင်ချောနွယ်ပြောသလို လမ်းတူလို့ ဘလော့ချင်းတွေ့ပြီနဲ့ တူပါရဲ့ … အားပေးနေပါမယ်။
မတူးတူးသာ... စာအုပ်တွေများကြီးဖတ်ထားတာပဲနော် ဆိုတာ ... ကာတွန်းတွေကို ပြောတာလား.. ဟိ။